Waa maxay isticmaalka cajaladda aluminium |
Markay timaado cajaladda aluminiumka, waxaan aaminsanahay inaad taqaanid. Nolosheena maalinlaha ah, waxaan inta badan arki karnaa alaabta qalabka korontada. Kuwa soo socdaa waa hordhac kooban oo ku saabsan adeegsiga cajaladda aluminiumka?
Ugu horrayn, cajaladda aluminiumku waxay ka samaysan tahay koollo cadaadis xasaasi ah oo tayo sare leh leh. Intaa waxaa dheer, bireedka aluminiumku wuxuu leeyahay astaamaha caabbinta heerkulka sare iyo hawo-qaadista hawada, sidaa darteed waxay leedahay saamayn ilaalin kuleyl oo wanaagsan iyo astaamo milicsanaya, oo lagu dabaqi karo nolosheena, foornada iyo foornada microwave-ka. Dabcan, sidoo kale waxaa jiri doona adeegsi badan warshadaha baabuurta.
Tifaftiraha xilliga cusub wuxuu soo bandhigayaa dhowr badeecadood oo muhiim ah oo ka sameysan aluminium
（1 fo Xadhig -hawo qaboojiyaha
Foil -qaboojiyaha qaboojiyaha waa qalab gaar ah oo loogu talagalay soo -saaridda fin -ku -beddelka kuleyliyaha hawo -qaboojiyaha. Foil -qaboojiyaha qaboojiyaha hore loo isticmaalay waa bireed cad. Si loo hagaajiyo sifooyinka dusha sare ee bireedka cad, dahaarka ka -hortagga dabaysha iyo dahaarka dabiiciga ah ee hydrophilic ayaa la dahaadhay ka hor inta aan la samaynin foil -biyood. Waqtigan xaadirka ah, biraha hydrophilic ayaa ka dhigan 50% wadarta bireedka qaboojiyaha, iyo saamiga isticmaalkiisa ayaa la sii wanaajin doonaa.
（2 fo Xirmooyinka baakadaha sigaarka
Shiinuhu waa soosaaraha ugu weyn ee soo saara iyo macaamilka adduunka. Waqtigan xaadirka ah, waxaa Shiinaha ku yaal 146 warshadood oo sigaar ah, oo wadar ahaan dhan 34 milyan oo kartoon. Asal ahaan, baakadaha bireedka sigaarka ayaa la isticmaalaa, kuwaas oo 30% lagu buufiyey bireed dahaarka leh, 70% waa bireed aluminium, iyo isticmaalka bireed aluminium duuban waa 35000 tan. Iyada oo kor loo qaadayo wacyiga caafimaadka dadka iyo saamaynta sigaarka dibedda laga keeno, kororka dalabka bireedka sigaarka ayaa si cad u gaabinaaya, kaas oo la filayo inuu u dhowaado Waxay xoogaa kor u kici doontaa dhawr sano gudahood.
（3 fo bireedka qurxinta
Aluminium -bireedku waa nooc ka mid ah walxaha la isku qurxiyo oo leh milicsiga sare. Waxaa inta badan loo isticmaalaa qurxinta dhismaha iyo alaabta guriga iyo baakadaha sanduuqyada hadiyadaha qaarkood. Codsiga bireedka qurxinta ee warshadaha dhismaha ee Shiinaha wuxuu bilaabmay 1990 -maadkii. Wuxuu si xawli ah ugu faafay Shanghai, Beijing, Guangzhou iyo magaalooyinka kale ee dhexe ilaa dhammaan qaybaha dalka. Sanadihii la soo dhaafay, baahida loo qabo bireedka qurxinta ayaa aad u kordhay. Guud ahaan, sida alaab lagu qurxiyo derbiga gudaha ee dhismayaasha iyo alaabta gudaha, waxaa sidoo kale si weyn loogu isticmaalaa albaabka iyo qurxinta gudaha ee ururada ganacsiga.
Intertape Polymer Group Aluminium -bireed, Sidee u Kululaan Kartaa Cajaladda Fiilooyinka Aluminiumka, Wejiga Labaad ee Xoojiya Aluminium-ka Wajahaya, Aluminium -bireed -Muraayadda Muraayadda Muraayadda, Fiilooyinka Aluminium ee Hal-dhinac leh, Sharooto,